Somaliland: Hay'adda Socdaalka Sweden oo Baadhista Magan-galyooyinka u isticmaalaysa Baraha Bulshadda - Wargane News
Home Somali News Somaliland: Hay’adda Socdaalka Sweden oo Baadhista Magan-galyooyinka u isticmaalaysa Baraha Bulshadda
Howl-wadeenada hey’adda Socdaalka (Migrationsverket) ayaa loo sahlay in ay adeegsadaan Baraha bulshada marka ay baadhayaan kiisaska magangeliyo doonka.
Wayaadii hore kombiyuuterada hey’adda ee ay howl-wadeenada ku shaqeeyaan lagama geli karin aaladaha buulshada laakiin hadda ayaa howl-wadeenada loo sahlay in ay aaladaha bulshada ka galaan kombiyuuterada shaqada marka ay ku gudo jiraan baaritaanka kiisaska magangeliyo doon.
Sida hey’adda Migrationsverket sheegtay in Social Media loo adeegsan doonaa ugu horey tixraacidda macluumaadka qof magangeliyo doonka ah laga helay. Sida xeerka dhigayana qofka magangeliyo doonka ah waxuu xag u leeyahay in la ogeysiiyo macluumaadka laga soo helay sociala media ee loo adeegsaday baartaanka kiiskiisa magangelyio doon.
Laakiin sidee laysku waafajin karaa hubinta sharciga iyo in Social Media loo adeegsado go’aan ka gaarista kiisaska magangeliyo doon?
Anne Ramberg waa xoghaya guud ee ururka looyarada Sweden, waxay sheegtay in sharci ahaan aysan mamnuuc aheyn in hey’adda Migrationsverket macluumad dheeri ka raadiso social Media balse muhim tahay in macluumaadka sociala media laga soo helay la ogeysiiyo qofka magangeliyo doonka ah oo la siiyo fursad uu uga jawaabi karo.
– Ma jirto sharuuc guud oo ka hortaagan Migrationsverket in ay soo aruuriyaan macluumaadka guud ee laga heli karo internetka laakiin sharuuddu waxay tahay keliya in macluumaadkas yahay mid uu qof weli heli karo. Migrationsverket waxaa saaraan waajib ah in ay baaraan oo qiimeeyaan kiiska magangeliyo doonka iyo baahidiisa amaangelin meel kastoo oo macluumadka go’aanka ku gundhigga u noqonaya ha laga keeno. Laakiin waxaa tahay in la dhowro dhex-dhexaadnimada iyo dhab ku salaysnaanta sida uu qabo dastuurka dalka.
Ann Ramberg ayaa sheegtay in ay jiri karto faa’idooyin ugu jiri kara ruuxa magangeliyo doonka ah in xogtiisa laga baaro baraha bulshada.
– Haddii qofka magangeliyo doonka ah sheegto daruuf u heelinaya kiskiisa magangeliyo doon oo daruufta laga soo heli karo baraha bulshada markas dabcan waxay u wanaagsan tahay ruuxa magangeliyo doonka ah.
– Laakiin dhibaatada waxay tahay sida loogu kalsoonaan karo macluumaadka laga helo baraha bulshada, laakiin taas run ahaantii kuma xirna sida maclummadka loo helay waayo macluumaad kasta ama internetka ha laga soo helo ama meel kale hubaal la’aanta mar kasta wey jireysaa, ayey tiri Ann Ramberg.
Jaaliyadda Somaliland ee Sweden
Somaliland: Muhanad Oo Ka Hadlay Joojinta Xoolaha Iyo Sahanka Ah In Suuq Laga Heli Karo UAE
Somaliland: Ethiopia oo Somaliland ka dalbatay inay xoolaha dalkeeda ka dhoofiso Dekedda Berbera
Daawo Wiil Reer Somaliland Ah Oo Ka Hawaabay Silsiladii Geelaygu Shanbuu ah Ee Xariir Ahmed Oo Karbaashay
“Muuse Cid Musharaxnimada Udiidi Kartaa Majirtee Isna Nabada Hanala Ilaaliyo” Daawo Wasiirkii Hore Ee Caafimaadka Dr. Xuseen Xoog